XOG: Khilaafka Madaxda Sare ee Puntland oo mudo huursanaa ayaa banaanka u soo baxay, Maxaadse ka og tahay? – Puntlandtimes
XOG: Khilaafka Madaxda Sare ee Puntland oo mudo huursanaa ayaa banaanka u soo baxay, Maxaadse ka og tahay?
GAROOWE(P-TIMES)- Warsidaha Puntlandtimes.com wuxuu ogaaday in uu mudo dheer taagnaa khilaaf hakiyey wada shaqeynta Madaxda ugu sareysa dawladda Puntland, oo soo kala dhexgalay,kaas oo bilowday waqti hore, balse marar badan ay dadaal ku bixiyeen Wasiiro iyo xildhibaano katirsan baarlamaanka Puntland in lasoo afjaro, lagana gudbo caqabadaha qaarkood, taas oo lagu guuleystay dhawr jeer oo is xigtay.
Warar laga helay dhinacyada ayaa daaha ka rogaya in wixii ka dambeeyey doorashadii Madaxweyne Farmaajo, uu khilaaf huursanaa u dhaxeeyey Madaxweynaha iyo Madaxweyne kuxigeenka Puntland, kaas oo ku saleysanaa arrimaha siyaasaded ee lala galayo dawladda Faderaalka Soomaaliya.
Madaxweyne kuxigeenka Puntland wuxuu xooga saarayey oo doonayey in wada shaqeyn dhaw lala yeesho dawladda Faderaalka, waxaana la rumeysan yahay in uu dhawr jeer oo uu safaro ku tagay Muqdisho ay is arkeen madax sare oo katirsan Madaxtooyada Soomaaliya.
Eng, Camay wuxuu beeniyey wararka sheegaya in uu la kulmay Agaasimihii hore ee Madaxtooyada Soomaaliya, isagoo sheegay in aysan aqoonba isku laheyn, xiligaas oo lagu eedeynayay in uu madaarka Muqdisho is arag kooban kula yeeshay Madax kasocotay Madaxtooyada.
Arrimaha khilaafkan markale sii kiciyey waxaa kamid ahaa Mashruucii Balaarinta Dekeda Boosaaso ee lagu wareejiyey DP WORLD, Xiisadii Khaliijka oo aad loogu kala qeybsamay, Dagaalka Tukaraq oo noqday boog kutaala Madaxda ugu sareysa Puntland ee waqtigan iyo arrimo kale oo ay ku jiraan mashaariicda dalka ka socda qaarkood.
Qadiyadahan qaarkood waxay kalifeen in uusan Madaxweyne kuxigeenka Puntland CabdiXakiim Cumar Camay uu mudo kaqeybgalin kulamada golaha wasiiradda ee Xukuumada, sidaas oo kalena uu wakiilada caalamiga ah ee u socday arrimaha xal u raadinta dagaalka Tukaraq ku qaabilay gurigiisa oo kuyaala Madaxtooyadii hore ee gudaha magaalada.
Imaanshihii Ra’iisulwasaare Xasan Cali Kheyre ee Puntland ayaa banaanka soo dhigay xariirka u dhaxeeya Madaxweyne kuxigeenka Puntland iyo dawladda Faderaalka, waxaana hadalo badan oo la jeediyey laga dhex akhristay sidda Madaxtooyada Soomaaliya ula dhacsan tahay fikradaha Madaxweyne kuxigeenka, oo u muuqday marar badan kuwa ka hor imaanayey talaabada go’aanada iyo dhaqdhaqaaqyada Madaxtooyada Puntland,
Hurgumooyinkan oo soo taxna ayaa ugu dambeyntii hadda banaanka u soo baxay, waxaana kala aragti duwanaanshaha u dhaxeeya madaxda Puntland uu ku soo beegmay waqti xasaasi ah oo uu dalku galay Loolan adag oo dhanka doorashada ah, waxaana sidaas oo kale ka aloosan Tukaraq iyo Sool ole-ole dagaal oo ay horboodayaan Gaas & Camay.
20 sanno oo ay jirtay Puntland waa markii ugu horeysay ee la maqlo is heysi u dhaxeeya Madaxda ugu sareysa Puntland oo isku maalin ay doorteen baarlamaanku, waxaana muuqata in ay jirto faragalin xoog badan oo lagu sameeyey gudaha mandiqada, dawladda Faderaalkuna ay xooga saartay in ay yeelato saameyn dhaw.
Shaki ma saarna in khilaafkan oo bilo badan huursanaa ugu dambeynta uu saameyn xoog leh ku reebi doono gudaha Hay’addaha Puntland, gaar ahaana mudada kala guurka oo uu Siyaasi kastaa raadsanayo danihiisa gaarka ah, welwelka taagan ayaana ah in haddii aan xal deg deg ah la helin ay wax badan isbedeli karaan.
Dadka maan gaabka ah ayaa maqaalkan lagu marinhabaabin, Adeer wax khilaaf ah oo cusub ma jiro, laakiin waa GAAS oo go’doon siyaasadeed oo gudo iyo dibad ah ku jira, tusaale Ethiopia waa kasoo xirantay sidaas oo kale Emirates. Waa tii 3 habeen oo isku xigta laga waayi jiray wadanka joog, hada kismanyo baa safar, meel kale oo kasta waa laga nacay.
MA XISHOODE, MUSUQMAASUQ, EEX, NIN JECLAYSI, WADANIYAD LA’AAN.